WASHINGTON(P-TIMES)- Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waraaqaha Aqoonsiga Safiirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee ay Soomaaliya u magacowday Safaaradda Soomaaliya ee magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka, kaas oo dhawaan gaaray halkaasi.
Madaxweyne Trump ayaa la arkayay oo gacanta ku haya warqadii lagu magacaabay Safiirka oo ay ku taalo calaamada Soomaaliya, waxaana dawladda Soomaaliya ay bogaadisay talaabada uu qaaday Mareykanku.
Soomaaliya ayaa sheegtay in uu Mareykanku yahay isbaheysi sal adag oo ay saaxiibo yihiin, ayna doonayaan in la kobciyo xariirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dal.
“Dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeduba waxay Dowladda Mareykanka u arkaan isbahaysi adag iyo saaxiib kaalin mug leh ka qaadanaya horumarka iyo hurosocodnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya” ayaa lagu yiri war kasoo baxay Madaxtooyada Muqdisho.
Safiirka cusub ee Soomaaliya Ambasador Cali Shariif Axmed ayaa horey uga soo shaqeeyey wadamo kala duwan oo ay kamid yihiin Afrika iyo Yurub, isagoo kulanka uu la qaatay Madaxweynaha Mareykankana ay ka wada hadleen xaaladdaha Soomaaliya.